कांग्रेसमा अबको सभापति को ? - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
कांग्रेसमा अबको सभापति को ?
काठमाडौं। कांग्रेसमा तीन समूह सक्रिय छन्। तीनै समूहबाट गरी ११ नेता आगामी महाधिवेशनमा सभापति पदका आकांक्षी देखिएका छन्। एउटै समूहबाट धेरैले सभापति पद ताकेपछि नेता मिलाउन सकस देखिएको छ।
सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, तेस्रो समूहको नेतृत्व गर्दै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला सम्भावित उम्मेदवार हुन्। देउवा समूहका उपसभापति विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठ, पौडेल समूहका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, नेता प्रकाशमान सिंह र डा. शेखर कोइरालाले आआफ्नो तयारी थालेका छन्। पौडेल समूहबाटै डा. रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसी सभापति पदका आकांक्षी छन्। सिटौला समूहबाट गगनकुमार थापाले सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। पौडेल समूहमा नेता मिलाउन सिंह र केसी लागेका छन्। देउवा भने निधि नउठ्नेमा ढुक्क रहेको उनीनिकट स्रोत बताउँछ।
देउवाले नेता÷कार्यकर्तासँगको भेटघाटसँगै पार्टीभित्र प्रभाव बलियो बनाउन विभाग गठन र मनोनयन धमाधम गरिररहेका छन्। संस्थापनइतर समूहको चर्काे विरोधका बीच पनि उनले विभागलाई पूर्णता दिने काम रोकेका छैनन्। थप विभाग गठनको तयारीसमेत गरिरहेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ।
नेता विश्वकर्माका अनुसार देउवा आफूलाई असफल बनाउन अर्काे समूह सुरुदेखि लागेको निष्कर्षमा छन्। ‘मैले सुरुदेखि नै सबैलाई मिलाएर लैजान खोजेको हुँ। तर, उहाँहरू पार्टीमा मलाई कसरी असफल बनाउन सकिन्छ भन्नेमै बढी केन्द्रित हुनुभयो’, देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै नेता विश्वकर्माले भने, ‘अब म पार्टीलाई बलियो बनाउँछु र आसन्न आमनिर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनाउँछु भन्ने सभापतिज्यूको दृढता छ।’
संस्थापन समूहकै नेता निधिले देउवासहित वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. कोइराला लगायतसँग भेटेर आफू सभापतिको तयारीमा रहेको जानकारी गराएका छन्। उनले पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको प्रस्तावसमेत गरेका छन्।
महामन्त्री डा. कोइरालाले पनि सभापति पदका लागि सक्रियता व्यापक बनाएका छन्। कोइरालाले सभापति देउवालाई आफूले मात्रै पराजित गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। कांग्रेसभित्र रहेको गुटको राजनीति अन्त्य गर्न पनि आफू सभापति बन्न खोजेको दाबी उनले गरे। ‘गुट त महाधिवेशनमा पो हुने हो। महाधिवेशन सकिएपछि केको गुट ? ’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘गुटका कारण पनि कांग्रेस कमजोर भएको हो। म सभापति निर्वाचित भइसकेपछि पार्टीमा गुटहरू हुँदैनन्।’
डा. शेखर कोइरालाले १३औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा सबैभन्दा बढी मत ल्याएका थिए। उनी त्यही बेला महामन्त्री पदका दाबेदार थिए। केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएलगत्तै देश दौडाहामा निस्किएका कोइराला काठमाडौंमा विरलै भेटिन्छन्। त्यो दौडधुपले नै उनी सभापतिका उम्मेदवारका रूपमा देखिएका थिए। उनी सभापतिको सबैभन्दा बढी आलोचना गर्ने नेताका रूपमा चिनिन्छन्।
उमेर र सक्रियताका हिसाबले पनि अर्काेपटक कुर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। ‘उहाँ कुनै पनि हालतमा ब्याक हुनुहुन्न। सकेसम्म संस्थापन इतर समूहबाटै साझा उम्मेदवारका रूपमा चुनावी मैदानमा जानहुन्छ। त्यसो नभए उहाँ आफ्नो टिम बनाएर पनि सभापति लड्नुहुन्छ’, कोइरालानिकट एक जिल्ला सभापतिले भने, ‘उहाँको उम्मेदवारीले कांग्रेसमा तरंग ल्याएको छ। उहाँकै नेतृत्वमा टिम बनाउने गरी पनि छलफल भइरहेको छ।’
अघिल्लो महाधिवेशनमा आफूलाई महामन्त्रीमा सहयोग गर्ने वचन दिए पनि मत माग्दा एक्लै हुनु परेको गुनासो उनको थियो। कांग्रेसभित्र भने उनलाई महामन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ।-अन्नपूर्ण पोस्ट